Ngaba Ngaba Uyazi Lamazwi Okuzonwabisa?
I-oksijeni yenye yegesi eyaziwa kakhulu emhlabeni, ngokuyininzi ngenxa yokuba kubaluleke kakhulu ukuba sisinde. Inxalenye ebalulekileyo yomhlaba kunye ne-hydrosphere, isetyenziselwa iinjongo zonyango, kwaye inefuthe elibi kwizityalo, izilwanyana kunye nezitye.
I-oksijini inomboro ye-athomu yesi-8 kunye nesimboli yesakhi O. Yayifumene nguCarl Wilhelm Scheele ngo-1773, kodwa akazange ayishicilele umsebenzi wakhe ngokukhawuleza, ngoko ke i-credit inikezelwa kuYoseph Priestly ngo-1774.
Nazi izinto ezi-10 ezithakazelisayo malunga nenxalenye yomoya.
Izilwanyana kunye nezityalo zidinga i-oksijeni yokuphefumula. Ukutshala i-photosynthesis kuqhuba umjikelezo we-oxygen, ugcine u-21% emoyeni. Nangona igesi ibalulekile ebomini, ubuninzi bokuba lunobungozi okanye bubulalayo. Iimpawu zobutyhefu be-oksijini ziquka ukulahleka kombono, ukukhwehlela, ukuxubha umzimba, kunye nokuxhwala. Kwixinzelelo oluqhelekileyo, i-oksijini yetyhefu ivela xa igesi igqitha ama-50%.
I-oksijesi yegesi ayinakubalabala, ayinangqiqo, kwaye ayinakulungiswa. Ngokuqhelekileyo kuhlanjululwa yi-fractional distillation yomoya ococekileyo, kodwa into efunyenwe kwiimveliso ezininzi, ezifana namanzi, i-silica kunye ne-carbon dioxide.
I-liquide kunye ne- oksijini eqinileyo iluhlaza okwesibhakabhaka . Kwiqondo elisezantsi kunye neengcinezelo eziphezulu, i-oksijeni ishintsha ukubonakala kwayo kwi-crystal monoclinic kwi-orange, ebomvu, emnyama, nangobunjengeentsimbi.
I-oksijeni ayikho imida . It has conductivity low and electrical conductivity, kodwa ukuphakanyiswa kwe-electronegativity kunye ne-ionization yamandla. Ifom eqinileyo inobungqungquthela kunokuba i-malleable okanye i-ductile. Ii-athomu zifumana iifowuni zifumaneke kwaye zenze izibophelelo zamakhemikhali.
I-oksijesi igesi ngokuqhelekileyo yi-molecule ye-divalent O 2 . I-Ozone, O- 3 , yenye enye ifomu ye-oxygen ecocekileyo. I-atomic oksijeni, ebizwa nangokuthi "i-singlet oksijeni" iyenzeka ngokwemvelo, nangona ion iyanamathela kwezinye izinto. I-oxygen ye-singlet ingafumaneka kwindawo ephezulu. I-atom enye ye-oksijeni isoloko ineenombolo ye-oxidation ye--2.
I-oksijeni isekela ukutsha. Nangona kunjalo, akunakutsha . Kuqwalaselwa njenge-oxidizer. Iimbumba zomoya ococekileyo awutshisi.
I-oksijeni iyimigama ye-paramagnetic, nto leyo ithetha ukuba ithathaka ngokukhawuleza kumbane kodwa ayiyi kugcina i-magnetism engapheliyo.
Phantse 2/3 yobunzima bomzimba womntu i-oxygen. Oku kwenza kube yinto ebuninzi kakhulu , ngobunzima, emzimbeni. Uninzi lwaloo oxygen luyingxenye yamanzi, i-H 2 O. Nangona kukho ii-athomu ezininzi ze-hydrogen emzimbeni kunee-athomu ze-oksijeni, zibangela ubunzima obuncinane. I-oksijeni nayo yinto ebalulekileyo kakhulu kwi-Earth crust (malunga ne-47% ubunzima) kunye neyesithathu into eqhelekileyo kwi-Universe. Njengeenkwenkwezi zitshisa i-hydrogen kunye ne-helium, i-oksijini iya kuba yinto eninzi.
I-oksijini enomdla iyona nto ibonayo imbala ebomvu, eluhlaza kunye nohlaza okomhlaza we-aurora . Yingqungquthela ebaluleke kakhulu, ngokubhekiselele ekuveleni ii-auroras ezimhlophe kunye nemibala.
I-oksijeni yimiqathango ye- atomic yobunzima kwezinye izinto kuze kube ngo-1961 xa yatshintshwa yikhabhi 12. I-oksijeni yenza ukhetho olufanelekileyo kumgangatho oqhelekileyo ngaphambi kokuba waziwa malunga nama-isotopi kuba nangona kukho i-isotophi zendalo ezi-3 zomoya we-oksijeni, ininzi yayo i-oxygen- 16. Yingakho ubunzima be-atomi ye-oksijeni (15.9994) buphantse ku-16. Ngama-99.76% we-oksijeni ngu-oxygen-16.
Ukubuza imibuzo ngesiJamani
Iinqwelo ze-Ford F-Series Pickup: 1973-1979
Uthando kunye noBrownings: uRobert Browning no-Elizabeth Barrett Browning